AH: သိုးတစ်ကောင်ကို အင်္ဂလန် ပေါင် ၁.၄ သန်းပေးဝယ်တဲ့ တရုတ်တွေ
သိုးတစ်ကောင်ကို အင်္ဂလန် ပေါင် ၁.၄ သန်းပေးဝယ်တဲ့ တရုတ်တွေ
လူတစ်ယောက်မှာ အကုန်ပြည့်စုံနေပြီ ဆိုရင်ဘာလုပ်မှာလဲ? တရုတ်မှာတော့ ဒီလုိုမျိုး သိုးတစ်ကောင်ကို ပေါင် ၁.၄ သန်းပေးပြီးဝယ်ယူနေတာကို Kashgar က Silk Road City မှာ တွေ့မြင်နေရမှာပါ။
ခုချိန်မှာ အဲ့ဒီလို သိုးမျိုး အကောင် ၁၀၀၀ လောက်ဘဲ ကမ္ဘာပေါ်မှာ ရှိပါတော့တယ်လို့ ဒီသိုးမွေးတဲ့လူတွေက ဆိုပါတယ်။ ဒီသိုးတွေဟာ Dolan Sheep မျိုးရိုးလို့ဆိုပါသတဲ့။ ဒီသိုးတွေဟာ လောလောဆယ်မှာတော့ ကုဋေကြွယ် ပိုက်ဆံဘယ်နားထားရမှန်းမသိတဲ့ တရုတ်ခေတ်သစ်သဋ္ဌေးတွေအတွက် နောက်ဆုံးပေါ် ရှားပါးအဖိုးတန် ပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်လာပါပြီတဲ့။
“သဋ္ဌေးကြီးတွေတော့သူတို့ရဲ့ ဇိမ်ခံကားကြီးတွေနှင့် ဒီကိုလာပြီးတော့ ဒီလိုသိုးတွေကို သူတို့ကားနောက်ခန်းထဲ ထည့်ထည့်ပြီးယူသွားတာဘဲ” လို့ အသက် ၄၈နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ ရှင်းကျန်း ပြည်နယ်မှာ သိုးမွေးတဲ့ လျှူဖန်းဟွ ဆိုသူက ပြောပါတယ်။ “များသောအားဖြင့်တော့ အာရှအလည်ပိုင်းကနေပြီး တရုတ်မှာ အခြေချနေထိုင်တဲ့ (Urghur) မွတ်စလင်တွေ က သူတို့ သိုးတွေကို သားဖောက်ဖို့လာဝယ်ကြတယ်။ နောက်တစ်မျိုးကတော့ သိုးတွေကို အိမ်မွေးအဖြစ်မွေးဖို့ပါ” လို့ လျှူက ထပ်ပြောပါ သေးတယ်။
ဒီ ဒေါ်လန် မျိုးရိုးသိုးတွေဟာ နှာယောင်ကောက်ပြီး အမြီး နှစ်ခွပါပါတယ်တဲ့။ နောက်ထူးခြားချက်တစ်ခုက သူတို့ရဲ့နားရွက်တွေဟာ အလွန် ရှည်လျှားတာပါတဲ့။ ဒီသိုးတွေရဲ့ မူလကတော့ Kashgar ပြည်နယ်ကဖြစ်ပါတယ်။ အရင်တုန်းကတော့ ဒီသိုးတွေကို စားဖို့ရာအတွက် မွေးမြူကြတာဖြစ်ပြီး အခုများတော့ အဖိုးတန် အိမ်မွေး တရိစ္ဆာန်အဖြစ်သို့ရောက်ရှိလာပါပြီ။
“ဈေးနှုန်းကတော့ သိုးတွေရဲ့ မျိုးရိုးစဉ်ဆက်ပေါ်မူတည်ပါတယ်”လို့ လျှူကပြောပါတယ်။ “သိုးမွှေးကမည်းလေ၊ နားရွက်ကကြီးလေ၊ မျက်နှာကောက်လေ တန်ဖိုးကြီးလေပါတဲ့။ အကောင်းဆုံးကတော့ မည်းနက်နေတဲ့ ကိုယ်ထည်နဲ့ အမြီးက အဖြူရောင်ရှိနေရင် ဈေးကြီးပါသတဲ့”
ဒီလို သိုးတစ်ကောင် ၁.၄ သန်းပေးဝယ်နိုင်တဲ့ တရုတ်တွေက ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဧရာဝတီမြစ်အမွေအနှစ်တွေကို ပေါချောင်ကောင်းနှိုက်လိုတာတော့ မဆန်းလှပါဘူး။ ချမ်းသာနေပြီဆိုမှာတော့ ရသလောက် ယူလိုတာက လူတို့သဘာဝ ပါဘဲ။ ကာကွယ်ဖို့ကတော့ ကျွန်တော်တို့ တာဝန်ပါ။ မနုံဖို့၊ မ “အ” ဖို့၊ မထူဖို့၊ မထိုင်းဖို့၊ မပိန်းဖို့၊ မဖျင်းဖို့ က ကျွန်တော်တို့တာဝန်ပါ။ ဧရာဝတီဟာ သားဖောက်ပြီးတော့ ပြန်မွေးလို့မရသလို သူကို တည်မှီနေတဲ့လူရဲ့၊ သစ်ပင်တွေ၊ ရေနေသတ္တ၀ါတွေကလည်း ရှိလေတာမို့ စဉ်းစဉ်းစားစားလေး လုပ်ကြပါလို့ တိုက်တွန်းလိုက်ပါရစေ။
Posted by AH at 9/27/2011 09:24:00 PM
ကိုရင် September 28, 2011 at 12:18 AM
ိမ်ရှေ့ မှာ နှစ်ချို့ နေတဲ့ ပက်ကျိတစ်ကောင်ရှိတယ်..
AH September 28, 2011 at 8:57 AM
ကျွန်တော့်ရဲ့ ကြွက်သိုက်ကို တကူးတက ကြွလာတဲ့ ကိုရင်ကို့ အထူးတလည် ကျေးဇူးတင်ပါကြောင်း။ ကိုရင်ရေ ပါဆယ်လေးနဲ့ ထုပ်ပြီးတော့သာပို့လိုက် ဒီမှာ လျှောက်ပြီးရောင်းကြည့်လိုက်ဦးမယ်.... ကမ္ဘာပေါ်မှာ တစ်ကောင်ထဲရှိတဲ့ ပက်ကျိဆိုပြီးတော့... တော်ကြာ ဒီက ကောင်တွေက စားကောင်းလှချည်ရဲ့ဆိုရင်တော့ ကိုရင် ပက်ကျိထပ်ရှာပေးရမှာနော်.... :P
mstint September 28, 2011 at 3:56 PM
ဟုတ်တယ် AH ရေ။ ဗဟုသုတ ဆန်းဆန်းကျယ်ကျယ် ဖတ်ချင်ရင် ဒီဘလော့ကိုရောက်လာလေ့ရှိတယ်။
AH September 28, 2011 at 10:27 PM
သန့်ခယူ၊ ရှဲ့ရှဲ့၊ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ ချိုအိစု နီဒါ၊ အာဂျီနိုမိုတို.... အန်တီတင့်ကို ကျေးဇူးတင်ကြောင်း တတ်သလောက်မှတ်သလောက် ရမ်းတုတ်တာ ဟီး ဟီး
မဒမ်ကိုး September 29, 2011 at 1:37 PM
အားထောင်(AH ) ပိုစ့်ကိုလာရတာတော်တော်တန်တယ် စုံစီနဖာပဲ ဘာတဲ့
သူက ထိုင်စားလို့ရတဲ့နေရာကအမေ့အိမ်ပဲလို့သိလိုက်ရတဲ့အချိန်မှာဆိုတာတောင်လုပ်လိုက်သေးတယ် ..
အောက်ကအာဂျီနိုမိုတို အချိူမှု့န့်ကြော်ငြာကပါသေးတယ် ဟဟဟဟး)
တင်သာတင်ဟေ့ လာမြဲလာမယ်း)
ဒီ တစ်ည ငါမူးအောင်သောက်မယ်
သို့မေမေ (သို့) အပြစ်မဲ့တဲ့ ရင်သွေးငယ်လေးတွေကို မဖ...
ဥပဒေ အထက်မှာ ဘယ်သူမှ မရှိဘူးဆိုတဲ့ ရဲအရာရှိ
ယန်း ၁၀ သန်းကို အိမ်သာထဲထည့်ခဲ့တဲ့ အလှုရှင်
ရေလွှာလျှောစီး ချစ်စရာ ပါပီလေးများ
ဟာသတိုလေးများ - ၄
ရှန်ဟိုင်းမှာ နောက်တစ်ခေါက်ထပ်ဖြစ်တဲ့ ရထားတိုက်မှု့
သက်တန့်ရဲ့ လေပြေ - အပိုင်း ၁
ငလျှင်လှုပ်၊ မြေပြို ပိတ်မိနေထဲကြားထဲက ၁ လကျော်ကြာ ...
သိုးတစ်ကောင်ကို အင်္ဂလန် ပေါင် ၁.၄ သန်းပေးဝယ်တဲ့ တရု...
World most valuable shipwreck - ကမ္ဘာ့ တန်ဖိုးအကြီး...
အိမ်သာကွဲလို့ ဆေးရုံရောက်သွားတဲ့ အမျိုးသမီး
တရုတ်ပြည်ရဲ့ ပထမဆုံး ရွှေရောင်းစက်(ATM)
Irish pensioner 'died of spontaneous human combust...
Wat Rong Khun - ငွေကျောင်းဆောင်
သက်တန့်ရဲ့ အစွန်းတစ်ဘက်ကို တွေ့ဖူးလား?
ကစဉ်ကလျား ဧရာဝတီ သီအိုရီ
Nicolas Cage ဟာ သွေးစုတ်ဖုတ်ကောင်လား?
ဒေါ်လာ ၂သိန်းခွဲ တန် အရက်ပုလင်းကို ၀ယ်တဲ့ တရုတ်
အကောင်းမြင် စိတ်ကလေး တစ်ခု
ကမ္ဘာပတ်မယ် စက္ကန့် ၆၀
အိုစမာဘင်လာဒင် ကို ၀င်စီးတဲ့ ဗီဒီယို
ဟာသတိုကလေးများ - ၃
မြို့ပြ မိန်းမတစ်ယောက်ရဲ့ အချစ်အကြောင်း
ဟာသတိုလေးများ - ၂
ဟာသတိုလေးများ - ၁
ဖြစ်တည်မှု့ ၃ ခု
၂၀၁၁ အတွက် ကမ္ဘာ့ လက်သည်းအရှည်ဆုံး အမျိုးသမီး
First customer in six years completes The Big One ...
Fly Geyser - သဘာဝ ရေပန်းများ
Principal of Management Online Lessons
Bermuda Triangle - ဘာမျူဒါ တြိဂံ
Natsumi Hayashi - လေမှာ ပျံဝဲနေသော မိန်းကလေး
မီတာ ၂၀၀၀ကျော် အမြင့်ရှိမည့် လူအင်အားဖြင့် တည်ဆောက...
First Hybrid Tug in Europe – Port of Rotterdam’s ‘...
အနာဂါတ်မှာ အသုံးပြုလာဖွယ်ရှိသည့် ဘက်(စ်)ကား
ညီမလေးက ပိုက်ဆံကို ကိုးကွယ်သတဲ့လား
၂၀၁၁ နိုဝင်ဘာ ၅ ရက်နေ့မှာ Facebook တစ်ကယ်ဘဲ ဆုံးခန...
အပျိုစင်လေးများကို အခမဲ့ ၀င်ခွင့်ပေးမည့် တရုတ်က အပ...
Facebook (ဖေ့စ်ဘွတ်) က ပိုက်ဆံတွေကို စားပစ်နေတာလား?